Daraasad qarsoodi ah COVID-19 oo ku taal Talyaaniga?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Daraasad qarsoodi ah COVID-19 oo ku taal Talyaaniga?
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Daraasad qarsoodi ah COVID-19 oo Talyaani ah qarsoodi maleh Stefano Merler.
Maxaa dhici kara inta u dhexeysa hadda ilaa 15-ka Luulyo oo ah furitaankii ugu horreeyay ee Talyaaniga shalay waxaa lagu soo qaatay qaab tirakoob oo uu soo saaray Stefano Merler, oo ah xisaabiyaha-epidemiologist ee Bruno Kessler Foundation oo sameeya xisaabaadka Machadka Sare ee Caafimaadka iyo Wasaaradda Caafimaadka. .
Xisaabinta ay bixisay Merler waxay ahaayeen: Ilaa iyo 1,200 dhibanayaal maalintii oo leh Rt of 1.25 taas oo u tarjumeysa ilaa 1,200-1,300 dhibanayaal maalintii.
Ilaa hadda illaa iyo Febraayo 2020, Merler waxay heshay lambarrada saxda ah.
Guddi ka kooban 24 khabiir oo dawlada talyaaniga kala taliya cudurka aafada, ayaa ahaa kuwo go’aan qaatay oo la sheegay inay xakameenayaan dib u furista.
Xisaabinta ay bixisay Merler waxay ahayd: "Ilaa 1,200 dhibanayaal maalintii oo leh Rt of 1.25." Rt waa cabirka sida ugu dhakhsaha badan ee fayrasku u faafo. Sidaas Palazzo Chigi oo sidoo kale loo yaqaan Chigi Palace, oo ah xarunta Golaha Wasiirrada iyo hoyga rasmiga ah ee Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga, ayaa diiday fikradda ah "in dhammaan la sii daayo."
Ilaa hadda illaa iyo Febraayo 2020, Merler waxay heshay lambarrada saxda ah. Daraasaddan, oo aan waligeed dawladdu shaacin, laakiin daabacaadda Il Corriere ay falanqeyn karto oo ay ka heli karto Abriil 16 Comitato Tecnico Scientifico (CTS), guddi ka kooban 24 khabiir oo dawlada talyaaniga kala taliya cudurka aafada, ayaa ahaa go, aan isla markaana lagu soo wargaliyay Palazzo Chigi si loo xakameeyo dib u furista, iyada oo loo tixgalinayo inay tahay mid aad u khatar badan sida uu codsaday hogaamiyaha xisbiga Lega, Matteo Salvini.
Rt-kii ugu dambeeyay ee lagu ogaadey kiisaska astaamaha, iyada oo la tixraacayo muddadii u dhexeysay Maarso 31 iyo Abriil 13, waa 0.81. Tani waa barta bilowga ah. Saadaasha waxaa jira xisaab oo keliya, waxba kama jiraan waxa dib loo furayo iyo wixii aan ahayn. Kuwani waa xulashooyin ay iska leeyihiin dowladda ay hoggaamiso Italy Raiisel wasaare Mario Draghi.